‘गाउँ फर्क अभियान पहिलो प्राथमिकता’ –भूषाल – MeroJilla.com
‘गाउँ फर्क अभियान पहिलो प्राथमिकता’ –भूषाल
निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले नगर र गाउँपालिकामा नयाँ नयाँ अभ्यासको शुरुवात गरेका छन् । प्राय यहाँका जनप्रतिनिधीका एउटै प्रकारका योजना छन् । तर,विहादी गाउँपालीकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भूषालले गाउँ फर्क अभियान प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले विहादी गाउँपालिका अन्तर्गतका यूवाहरुलाई गाउँमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । विहादी गाउँपालिका अन्तर्गतका २५ सय घरधुरीका परिवारलाई सहन छिर्न रोक्ने गाउँपालिकाको योजना छ । यसै बिषयमा रहेर रामकृष्ण लामिछानेले विहादी गाउँपालीकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भूषाल संग गरेको कुराकानीको संक्षेप ।
१.अध्यक्ष ज्यू यो अभियान सफल होला ?
– धन्यवाद तँपाईलाई । हर्नुहोस मानिसले चन्द्रमामा पुग्न सक्छु भन्ने सोचेको थियो ? जहाज,पानीजहाज चलाउँन सक्छु भन्ने सोचेको थियो होला त ? डाक्टर,पाईलोट,ईन्जिनियर पनि मानिस हुन सक्दो रहेछ होईन र ? तर्सथ,हामीले कुनै पनि काम र योजनालाई असम्भव ठान्छौं अगाडी बढ्न सक्दैनै । यो अभियानमा हाम्रो गाउँपालिका सफल हुन्छ । सवैको पूर्ण साथ पाईन्छ भन्ने आशा पनि छ । गाउँमा अवको केही बर्ष मै सवै सुबिधा पुग्छ । त्यसका लागि हामीले गुणस्तरीय रुपमा सवै क्षेत्रमा सडक सहित यातायातका पूर्वाधार,शिक्षा,स्वास्थय,कृषि,खानेपानीका क्षेत्रमा कामहरु पनि गर्दैछौं । सवै विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रले गाउँ र पालिकाका मानिसहरुलाई छुन्छ भन्ने किन बजार जान्छन् ।
२.बजार झरेका बासिन्दा गाउँ कसरी र्फकाउनुहुन्छ ?
– पहिला यहाँ सडक सहित यातायातका पूर्वाधार,शिक्षा,स्वास्थय,कृषि,खानेपानीका योजनाहरु नभएकाले बजार उनीहरु झरे । अव उनीहरुले बजारमा उपभोग गरेका सवै सुबिधाहरु यँही पाए भन्ने बजारमा किन बस्लान् र । अहिले बजारको महङ्घीले गाउँ कहिले जाउँ भन्ने अवस्थामा भएकाहरु अवश्य आउँछन् । आज नआउँलान हाम्रो गाउँ पूर्वाधारमा अव्वल भएपछि ढिलोचाँडो आउँछन् ।
३.युवाहरुलाई उद्यमशिलता तर्फ लौजाने सोच्नुभएको छ ?
–गाउँपालिकाले यहाँका युवाहरुलाई उद्यमशिल बन्न अनुरोध गरेका छ । त्यसका लागि जस्तो कुखुरापालन,बाख्रापालन,गाईभैंसी पालन गर्न चाहान्छौं,कलकारखाना सञ्चालन गर्छौ भन्दै निवेदन पनि आउने गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले अनुगमनको आधारमा रहेर विभिन्न आर्यआर्जनका लागि कार्यक्रमहरु दिन्छौं । युवाहरुले चाहना गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउँने हाम्रो सोच पनि छ । समयसमयमा यहाँका महिला युवायुवती लगायतका समूदायलाई हामीले तालिम पनि दिईरहेका छौं । पहिला व्यवसाय गरेका युवाउद्यमीहरुलाई हामीले उद्यग सञ्चालन गर्दा आईपरेका समस्याका बिषयमा सोधखोज गरि समस्या समाधान गर्ने योजना बनाईरहेका पनि छौं । हामीले युवाहरुलाई विभिन्न तालिम जस्तै कम्पुयुटर तालिम मिहलालाई श्रीङ्घर लगायतका तालिम अघिल्लो आवमा दियौं । अव यो नयाँ आवमा यी र यस्तै कार्यक्रमहरु सुचारु गछौं ।
४.केही वडाहरुमा विकासको नाममा विनास भयो भन्ने गुनासा छन् नी ?
– काम गर्दै जाँदा बरार्चौरमा पटक पटक यस्तो भयो भन्ने सुनियो । हामीले बुझयौं । वडाध्यक्षले समाधानको प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ । खासै ठुलो समस्या होईन । हामीले पनि विकास गर्छौ विनास हुन्छ भनेर काम त गरेका हुन्नौ । अहिले बर्खाको समयमा काम गर्न नपाएको भए त्यस्तो गुनासो आउँदैने थिएन होला ।
५.अन्यतमा त्यहाँका बासिन्दालाई के भन्नुहुन्छ ?
– पहिला आभार व्यक्त गर्दछु । त्यही हो हामी बोलेर भन्दा पनि काम गरेर जनताको विश्वास जित्न चाहाँनछौं । गाउँगाउँका जनताले केन्द«को सेवा र सुविधा पाउँने अधिकारवाट वञ्चित नहुन भन्ने हाम्रो चाहना हो । विकासमा सवैको साथ चाहिन्छ । राजनितिक दम्भ नराखी काम गारौं । हामी जुनजुन पार्टीवाट टिकट पाएर जनप्रतिनिधी भए पनि अवको ५ बर्ष सवैको साझा हौं भन्छौै । काम गर्दा सानामसिना समस्या आउँन पनि सक्छन् । रचनातमक सुझाव र सललाहको हामीले अपेक्षा गर्दछौं । यो संगै गाउँ फर्क अभियान हाम्रो अर्को प्राथमिता हो यसलाई पनि सवैले सफल पारौं ।